Ixesha kunye nabahlobo 58
Yintoni esisibongoza ukuba siguqukele kwimibono yethu. Ingaba sivumelekile kangakanani ukuba sichasane nezimvo zethu kwezabanye?
Uluvo lubangelwa kukucinga. Uluvo lukhona phakathi kokukholelwa kunye nolwazi malunga nezifundo okanye izinto. Umntu onoluvo malunga nento, uyahlula phakathi kwabo banolwazi okanye inkolelo ethile malunga nomxholo. Umntu unoluvo kuba ecinga ngalo mbandela. Uluvo lwakhe lusenokuba loluchanekileyo okanye aluchanekanga. Nokuba ichanekile okanye ayiyi kuxhomekeka kwindawo yakhe nakwindlela aqiqa ngayo, ukuba ukuqiqa kwakhe ngaphandle kocalucalulo, izimvo zakhe ziya kuchaneka, kwaye, nangona eqala ngezakhiwo eziphosakeleyo, uya kubabonakalisa ukuba abalunganga ekhondweni. ngeengcinga zakhe. Ukuba, nangona kunjalo, uvumela umkhethe ukuba uphazamisane nokuqiqa kwakhe, okanye isiseko sendawo yakhe kwicala lokucalula, umbono awumbayo uhlala ungachanekanga.
Izimvo umntu azenzileyo zimmela inyaniso. Isenokuba iphosakele, sekunjalo iyakholelwa ukuba ilungile. Ngaphandle kolwazi, indoda iya kuma okanye iwele ngezimvo zayo. Xa izimvo zakhe zinento yokwenza nenkolo okanye enye into, ukholelwa ukuba kufuneka abamele kwaye azive esenza ukuba abanye bamkele izimvo zakhe. Ukusuka apho aguqukele ekuguquleni.
Into esisibongoza ukuba siguqulele izimvo zethu lukholo okanye ulwazi apho imibono yethu ihlala khona. Sisenokubongozwa ngumnqweno wokuba abanye baxhamle kwinto esiyibona ilungile. Ukuba kulwazi oluphantsi komntu kunye nomnqweno wokwenza okuhle kongezwa kwimibono yobuqu, iinzame zokuguqula abanye bazenzele ezabo iimbono zinokuphuhlisa ukuzondelela, kwaye, endaweni yokulungileyo, wenzakala. Isizathu kunye nenkoliseko kufanele ukuba ibe zizikhokelo zethu ekuguquleleni phambili izimvo zethu. Isizathu kunye nokuhle-kuya kusivumela ukuba siveze izimvo zethu kwingxoxo, kodwa sinqande ukuba sizame ukunyanzela abanye ukuba bazamkele. Ukuqiqa kunye nokulunga-kuya kusinqanda ukuba sinyanzelise ukuba abanye bamkele kwaye baguqulwe izimvo zethu, kwaye basenza somelele kwaye sithembeke kwinkxaso yoko sikucingayo ukuba siyayazi.